Maalinta Jacaylka adduunka: toddoba qodob oo aad xidhiidh ku samaysan karto dhanka baraha bulshada ama online-ka - Worldnews.com
Xidhiidhada tooska ah ee online-ku ee dhanka internetka ayaa caan ka ah adduunka oo dhan iyo da 'kasta samayso - laakiin waa sidee heerka ka guul gaadhiddiisu? miyaad tahay keligaa oo raadinaysaa maalinta jacaylka qof aad is jeclaataan? Dhugo qoraalkan waxaa kor u kacaya fursadahaaga aad jacaylkaagii kaga heli karto dhanka
‘Way qurux badnayd, kaftan badnayd sidoo kalena waxay ahayd tuugo’
Thomas iyo Tonia waxa ay ku kulmeen baraha bulshada waxaanay bilaabeen inay farriimo isugu dirdiraan si joogto ah, iyagoo wadaagayey xiisaha ay u qabaan labadooduba safarka...
Waa wax ay ka siman yihiin dad badan oo ay ka mid yihiin Maya Angelou iyo Tom Hanks, Michelle Obama iyo Penelope Cruz - shaki kuma jiro inay yihiin dad guulo gaaray isla...
Coronavirus: Shan arrimood oo aad u baahan tahay in aad ogaato
Khuraafaadka ku gedaaman halista coronavirus ee caalamka ayaa wareegaya. Haddaba halka waxaan idiinkugu soo gudbineynaa xaqiiqooyiin ku saabsan. Waxa sanka lagu xirto si fiican kuuma caawinayaan Waxaa suuragal ah in aad aragto dad sanka iyo afka u xiran yahay, balse caddeyn badan looma hayo in ay taa ka caawineyso in xanuunka ay ka badbaadaan. Waxaa taas ugu wacan in ay...
In ka badan kun ruux ayaa u dhintay cudurka Coronavirus. In ka badan afartan kun oo ruuxna wuu ku dhacay caalamka oo dhan, Shiinuhuba ha ugu badnaadee. Coronavirus waa cudur faafi og oo fara ba'an ku haya dalka Shiinaha gaareyna waddammo badan oo ah Bari iyo Koofur Bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika. Ururka Caafimaadka Adduunka, WHO, wuxuu ku dhawaaqay in magaca rasmiga ah ee...
Tom & Jerry: 80 sano ayaa la daawanayaa dagaalka bisadda iyo jiirka
Bisad lab ah oo kartoon ka sameysan oo muuqaal laga dhigay ayaa ka caroonaya shanqarta jiir ku jira gurigiisa, kaddib wuxuu diyaarinayaa qorshe uu uga soo saaro hoygiisa, isagoo u dhigaya dabin ka sameysan cunto uu jiirka ka helo. Jiirkii, oo caqli badan leh ayaa fahmaya qorshaha oo dhan, si nabad ah ayuuna dabinkii uga cunayaa raashinkii lagu gaadayay, isagoo calooshiisa ay...
Tan waa da\_'da aynu ugu farxad yar nahay nolosha (balse dib ayey ka wanaagsanaataa)
Waxa lagu sheego in dhibaatada cimri dhexaadku tahay, maaha arrin been ah. Sidaa waxa sheegtay daraasad mug leh oo laga sameeyey 132 dal oo uu sameeyey dhaqaale yahanka David Blanchflower. Darasaddaas oo uu daabacay January, xafiiska cilmi baadhista dhaqaalaha qaranka oo ah mac-had Maraykan ah, ayaa Blanchflower waxay muujisyey in "hoobadka farxaddu" ka jiro dalalka badankooda....
Bulukeeti ka samaysan kaadi bani\_'aadan
Kaadi bani'aadan ayaa loo isticmaalay in laga sameeyo bulkukeeti (Jaajuur) aan bii'ada wax u dhimayn oo ay soo saareen arday dhigata jaamacad ku taalla South Africa. Waxay isku datreen kaadi, ciid, iyo bakteeriya, hanaan u saamaxaya in isku darkaas uu ku dhagaxoobo heerkulka caadiga ah". "Waxay la mid tahay sida jaballadu ugu dhex samaysmaan badda" ayuu ku yiri BBC Dyllon...